Water, Research and Training Centre | ICEWE	WRTC	Water, Research and Training Centre	ရေ၊ သုတေသန နှင့် လေ့ကျင့်ရေးပညာဋ္ဌာန	သီတာရေစင်၊ တူယှဉ်သီလ၊ သုတပညာ၊ ပြည်လုံးသာ	Home	Organization	Activities	ICEWE	ARBRO	Gallery	Partners	Archives	Contact Us	ICEWE Logo
CIVIL, EARTH & WATER ENGINEERING
မြို့ပြ၊ ဘူမိနှင့် ရေဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း
The emergence and existence of the institution for the professional development of Myanmar engineers who are beneficial to the society, abided by the engineering ethics, and ready to serve in civil engineering works with greater integrity.
To produce world-class engineers
To produce engineers who possess integrity and practice engineering ethics
To produce engineers who uphold the sustainable development of humanity
To supply good engineers in timely manner to satisfy the human resources needs of Myanmar and the Asia-Pacific region.
To establishabridging institution that helps to apply theories to real-life civil engineering works.
Academic & Management Board
U Cho Cho(Chairperson)
Ko Tar (Dr. Thant Lwin Maung)(Vice Chairperson)
Prof. Dr. Khin Ni Ni Thein(Secretary General)
Postgraduate Diploma Programme Course
Design and structural analysis of R.C.C
Codes of pratice and specifications
Water quality, sanitation and water supply
Hydroinformatics and IWRM
Cross Cutting Subjects
Engineering green economy
Activities of ICEWE
ICEWE-WRTC group participated “Water Forum” in Mandalay
ရေချို အရင်းအမြစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ကလျာဏ မိတ္တ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဦးဆောင်၍ မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅) ရက် နေ့တွင် မန္တွလေးမြို့၊ YMCA ခန်းမဆောင်တွင် မနက် (၈) နာရီခွဲမှ ညနေ (၅) နာရီထိ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Announcement of ICEWE
မြို့ပြ၊ ဘူမိနှင့် ရေအင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းသစ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း
မြို့ပြ၊ ဘူမိနှင့် ရေအင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်းမှာ B.E (Civil) ဘွဲ့ရ လူငယ်များ အတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အဆင်သင့် ဖြစ်စေရန် နှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ထိုင်းနိုင်ငံ Asian Institute of Technology (AIT) နှင့် Mahidol University တို့နှင့် ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Institute for Civil, Earth and Water Engineering (ICEWE)
2/A, Thamadi 4th St., Sa/Kha 2nd Qr.
Tel: +95-9-43154667, +95-9-5111880, +95-9-43038023, +95-9-73107536
WRTC Webmaster Thiri Zhon
Copyright WRTC © 2013 | All Right Reserved
Powered by Myanmar Links.